people Nepal » राप्रपाले ९ जिल्लामा चुनाव लड्न नपाउने किन ? राप्रपाले ९ जिल्लामा चुनाव लड्न नपाउने किन ? – people Nepal
राप्रपाले ९ जिल्लामा चुनाव लड्न नपाउने किन ?
काठमाडौं । पार्टीको विधानबाट हिन्दु राज्य र राजतन्त्र हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपालाई अर्को झड्का लागेको छ । उसले मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, गोरखासहित ९ जिल्लामा चुनाव लड्न नपाउने भएको छ ।